Myanmar Gazette » The Panama Papers & Burma	16
Panama Papers လို့ခေါ်နေကြတဲ့ ပြည်ပမှာ လျှို့ဝှက်ဘဏ်စာရင်း ဖွင့်ထားသူတွေရဲ့ စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်သူတွေဟာ တရားဥပဒေ ချိုးဖောက်ရာ ရောက်မရောက် သေသေချာချာ မပြောနိုင်ပေမဲ့ ဒါဟာ ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ကို အလွဲသုံးစားမှု တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့တစ်ခုက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအစိုးရတွေအနေနဲ့ ဒီစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်သူတွေရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို တောင်းယူပြီး အများပြည်သူသိရှိအောင် ထုတ်ပြန်ပေးဖို့လည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ သတင်းအပြည့်အစုံကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ကိုရဲခေါင်က တင်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ၀ါရှင်တန်မြို့တော်အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ သတင်းထောက်အဖွဲ့ ICIJ က ပနားမား အခြေစိုက် Mossack Fonseca ဥပဒေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ ဆီက ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းပေါင်း ၁၁.၅ သန်းလောက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်က သူတို့ရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ တင်ပြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာရင်းထဲမှာ နိုင်ငံတကာမှာ ထင်ရှားတဲ့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
အခုလို ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ သန်းနဲ့ချီပြီး ပေါက်ကြားခဲ့တာနဲ့ ပက်သက်ပြီး၊ ၀ါရှင်တန်ဒီစီအခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Global Financial Integrity (GFI) က ဒါဟာ ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ကို အလွဲသုံးစားမှု တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအစိုးရတွေအနေနဲ့ ဒီစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်သူတွေရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို တောင်းယူပြီး အများပြည်သူသိရှိအောင် ထုတ်ပြန်ပေးဖို့လည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဒီ Panama Papers စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်သူတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေရဲ့ တည်ဆဲဥပဒေတွေကို ချိုးဖောက်ရာ ရောက်မရောက် ဆိုတာနဲ့ ပက်သက်လို့ (GFI) အဖွဲ့ရဲ့ ပြန်ကြားရေးနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး Christine Clough က အခုလို ပြောပါတယ်။
“ဆယ်စုနှစ်တော်တော်များများ အကြာက စာရွက်စာတမ်းတွေ အပါအ၀င် စာရွက်စာတမ်းပေါင်း ၁၁သန်းခွဲလောက် ပေါက်ကြားသွားတဲ့ ဒီကိစ္စမှာ အဓိက ပြဆိုနိုင်တာက ပြည်ပ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကုမဏီတွေ ဥပဒေကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ လှည့်စားပြီး အလုပ်လုပ်နေကြသလဲ ဆိုတာကိုပါ။ ဒီလုပ်ငန်းတွေက အမှန်တကယ်မရှိတဲ့ အမည်မသိ ကုမ္ပဏီတွေကို တည်ထောင်ထားပေးပြီး၊ အဲဒီ တကယ်မရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေရဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာ သူတို့ရဲ့ ဖောက်သည်တွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ငွေကြေးတွေကို ထည့်ထားပေးပြီး လျှို့ဝှက်ပေးထားဖို့ အကူအညီပေးနေတာပါ။ ဒါဟာ တရားမ၀င်တဲ့ကိစ္စလို့တော့ သေချာပေါက် ပြောလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဒီလို တည်ထောင်ပေးထားတဲ့ ကုမ္ပဏီ တွေက ပြစ်မှုတစ်ခုခု ကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ တရားမ၀င်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ကုမ္ပဏီ ရှိရုံနဲ့တော့ တရားမ၀င်ဘူးလို့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ ဒီလို ကုမဏီတွေကို အသုံးချပြီး ဘယ်လို အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကို သိခွင့်ရတဲ့အတွက် အများကြီး အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အစိုးရနဲ့ ပေါ်လစီချမှတ်သူတွေအတွက် အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။”
Panama Papers စာရင်းထဲမှာ ထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်အချို့လည်း ပါဝင်နေပြီး၊ အချို့ကလဲ စာရင်းထဲမှာ ပါသလို ပြည်ပမှာ လျှို့ဝှက် ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပြီး ငွေကြေးတွေ စုဆောင်းထားတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်ကို လုံးဝ ငြင်းပယ်ထားကြပါတယ်။ Panama Papers စာရင်းထဲမှာ ပါတဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ ဘယ်လောက် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ရှိသလဲဆိုတာကို GFI အဖွဲ့က Christine Clough က အခုလို ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
“ကျမရဲ့ အမြင်အရတော့ ဒီသတင်းအချက်အလက်တွေဟာ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ရှိပါတယ်။ ICIJ အဖွဲ့ဟာ တကယ်ကို ပညာရှင် ဆန်ဆန်နဲ့ ဒီကိစ္စကို ကိုင်တွယ်ပြီး၊ ဒီသတင်းအချက်အလက်တွေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ သူတို့ဆီကို ရောက်လာတဲ့ စာရွက်စာတမ်းပေါင်း ၁၁.၅သန်းလောက်ကို ဒီအတိုင်း အွန်လိုင်းပေါ် တင်ပေးလိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါမတိုင်ခင် နှစ်နဲ့ ချီပြီးတော့ ကျွမ်းကျင်သူ ဥပဒေ ပညာရှင်တွေ၊ နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ကျော်က စာနယ်ဇင်းသမားတွေနဲ့ တိုင်ပင် ညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီ စာရွက်စာတမ်းတွေထဲမှာ ဘာတွေပါသလဲ။ ဒီသတင်းအချက်အလက်တွေကို လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လွတ်လပ်ခွင့်ကို မထိခိုက်ပဲ အများပြည်သူရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မျိုးဖြစ်အောင် ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ ထုတ်ပြန်ပေးမလဲဆိုတာကို အများကြီး ချိန်ဆခဲ့ကြပါတယ်”
GFI အဖွဲ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ထဲကနေ ၁၉၆၀ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၁၀၀ နီးပါးရှိတဲ့ တရားမ၀င် ငွေကြေးတွေ စီးဝင်စီးထွက်မှုရှိနေတယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိထားတဲ့ အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို စက်တင်ဘာလက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ခုလို တရားမ၀င် ငွေကြေး စီးထွက်မှု ကိစ္စဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ၀င်ငွေ ကွာဟချက်တွေကို ပိုဆိုးစေပြီး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကို နှောင့်နှေးစေတဲံအတွက် မြန်မာနိုင်ငံထဲကနေ စီးထွက်နေတဲ့ တရားမ၀င်ငွေကြေးတွေကို အစိုးရသစ်အနေနဲ့ဂရုတစိုက် ကြည့်ရှုလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်း GFI အဖွဲ့က Christine Clough က ပြောပါတယ်။
“အခုလို လျှို့ဝှက်ငွေကြေးစနစ်မျိုးကို အကြမ်းဖက်သမားတွေကလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးနဲ့ လူကုန်ကူးတဲ့ လူတွေကလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ လာဘ်စားထားတဲ့ အစိုးရအရာရှိတွေကလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေက အခွန်ရှောင်ချင်လို့ လဲ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလူမဆို ငွေကြေးတွေ လျှို့ဝှက်ပြီး သွားထားနိုင်တဲ့ စနစ်ရှိနေတာဟာ အများပြည်သူ အကျိုးစီးပွားအတွက် ကောင်းတဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို တရားမ၀င် ငွေကြေးတွေ နိုင်ငံထဲကနေ စီးထွက်လို့ ရနေတဲ့ စနစ်တစ်ခုရှိနေတာကို ဘယ်လို အစိုးရမျိုးကမှ ခွင့်မပြုသင့်ပါဘူး။”
ICIJ အဖွဲ့ရဲ့ Panama papers စာရင်းထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ လူပုဂ္ဂိုဟ် နာမည်တွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဦးအောင်ကျော်မြင့်၊ ဦးအေးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဥမ္မာမိုးမြင့်၊ ဦးကျော်ဝင်း၊ ဦးမောင် မောင်ဆွေတင်၊ ဒေါ်မြမြစိုး၊ ဒေါ်မြသီတာဆွေတင်၊ ဦးသုတ၊ ဦးဌေးမြင့်၊ ဦးမိုးမြင့် ခေါ် ဦးမိုက်ကယ်လ်မိုးမြင့်၊ ဦးမြင့်ဆွေ၊ ဦးမျိုးတင် တို့ကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီစာရင်းမှာ ပါဝင်သူတွေထဲ ဦးအေးဇော်ဝင်းဟာ အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေဝင်းရဲ့သားမက်ဖြစ်ပြီး ဦးမိုက်ကယ်မိုးမြင့်ရဲ့ဇနီး ဒေါ်ဥမ္မာမိုးမြင့်ကတော့ လက်ရှိမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အနီးကပ် ကူညီဆာင်ရွက်ပေးနေသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားနာမည်နဲ့ လူလေးဦးပါဝင်ပြီး Ernest Howard Bolton II, Jonathan W. Smith, Quamruddin Ahmed နဲ့ William Mark Hilsman ဆိုပြီး ပါဝင်တာ တွေ့ရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့လျှို့ဝှက်ဘဏ်စာရင်းတွေထဲမှာ မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ၁၆ ဦးပါဝင်
ကမ္ဘာတလွှားက နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ထင်ရှားသူတွေရဲ့ အမည်တွေနဲ့၊ ဘဏ်ငွေစာရင်းတွေကို ဖွင့်ချထားတဲ့ Panama Papers လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ဘဏ်စာရင်းတွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ် ၁၆ ဦးနဲ့ ကုမ္ပဏီ ၁ ခု ပါဝင်နေပါတယ်။
အဲဒီအထဲမှာ အရင် မဆလ တပါတီ အာဏာရှင်- ဗိုလ်ချုပ်ြကီးဟောင်း ဦးနေဝင်းရဲ့ သားမက်ဖြစ်သူ ဦးအေးဇော်ဝင်း၊ စစ်အစိုးရခေတ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ယုဇနဦးဌေးမြင့်၊ ရွှေသံလွင်ဦးကျော်ဝင်း၊ ဦးမိုက်ကယ်မိုးမြင့် … စတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ စာရင်းတွေ ပါဝင်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်များအဖွဲ့ ICIJ က ရေးသားထားပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ၁၄ဝ ကျော်ရဲ့ အခွန်ရှောင် လျှို့ဝှက်ဘဏ်စာရင်းတွေကို ပနားမားနိုင်ငံက Mossack Fonseca ရှေ့နေအဖွဲ့က ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Panama Papers လို့ အမည်တွင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာရင်းတွေထဲမှာ ရုရှားသမ္မတ ပူတင်နဲ့ တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင်းပင်ရဲ့ မိသားစုပိုင် လျှို့ဝှက်ငွေစာရင်းတွေ ပါဝင်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
https://offshoreleaks.icij.org/ စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားချက်အရ… အဲဒီ လျှို့ဝှက်ဘဏ်စာရင်းတွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကဆိုပြီး ဖော်ပြထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ၁၅ ယောက် ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့…
၁။ ဒေါက်တာအောင်ကျော်မြင့် – Director of Chief Target Overseas Ltd
၂။ အေးဇော်ဝင်း – Shareholder of Compass Point Finance Limited and Sky-link Communications Ltd.
၃။ ဒေါက်တာ ဥမ္မာမိုးမြင့် – Shareholder of MPRL E&P Pte Ltd
၆။ ကျော်ဝင်း – Director/Shareholder of Chance Best Development Limited
၇။ မောင်မောင်ဆွေတင် – Shareholder/ Director of Master Timber Corporation
၉။ မြသီတာဆွေတင် – Shareholder/ Director of Master Timber Corporation
၁၂။ ဦးဌေးမြင့် – Shareholder/ Director of High Returens Trading Ltd
၁၃။ ဦးမိုးမြင့် (ခ) မိုက်ကယ်မိုးမြင့် -Shareholder/ Director/ Beneficial Owner of ASIA Drilling Pte Ltd
၁၄။ ဦးမြင့်ဆွေ – Director/ Shareholder of Myint & Associates Company Limited
၁၅။ ဦးမျိုးတင် – Director/ Bank Signatory of MPRL E&P Pte Ltd
kai says: ပနားမား ငွေကြေးစနစ် ကော်မရှင်ဖွဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်
VOA (မြန်မာပိုင်း) 07.04.2016 22:14
kai says: ဒါတွေက…icij.org မှာရှာတွေ့တဲ့ အချက်အလက်တွေပါ…။
မြစပဲရိုး says: နာမည် နှစ်ယောက်ထပ်နေလို့ ပြန်ဖြုတ်ထားတာပါ။ လို့ ၁၇ – လူမဟုတ် တာ ၁ ဒါကြောင့် ၁၆ လို့ ပြောတာပါ။
ကိုယ့်နိုင်ငံတွင်းမှာ ပြဌာန်းဥပဒေ မရှိရင် ဘာမှ လုပ်လို့ မရ ထင်တာပါဘဲ။
“Panama Papers စာရင်းမှာ ပါဝင်သူတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ အစိုးရတွေမှာတာဝန်ရှိ” ဆိုတာ ဘယ်သူ့အာဘော်တုန်း။
အခုမှ တက်လာပြီး အခြေကျအောင် လုပ်နေဆဲ အချိန်မှာ အပြင်က နေ ဘာကြောင့် တွန်းအားတွေပေးနေလဲ မစဉ်းစားတတ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ သူ့နားမှာ ရှိနေကြတဲ့ သူ တွေ ဟာ အပြင်က လေ သမား တွေထက် ပိုပြီး လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။
ပြင်ပ နိုင်ငံရေး ဆရာကြီး တွေ တောင် အကွဲကြီးကွဲ အလွဲကြီးလွဲနေတာ ကို ဆ ဆရာကြီး လုပ်နေကြသေးတယ်။ တစ်ချို့ စကား တွေ က စေတနာ မပါကြပါ။
ပြောချင်လွန်း လို့ ဟုတ် ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် ပြောမှာဘဲ ဆိုလဲ ပြောကြပါလေ။
kai says: “Panama Papers စာရင်းမှာ ပါဝင်သူတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ အစိုးရတွေမှာတာဝန်ရှိ” ဆိုတာ.. VOA သတင်းသမား “ရဲခေါင်” ရေးထားတာမို့.. VOA အာဘော်ပေါ့..။
အကြမ်းအားဖြင့်.. အဲဒီလူတွေနဲ့.. ယူအက်စ်အစိုးရနဲ့ တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ဖို့ခက်(သွား)ပါလိမ့်မယ်..။
ငွေကြေးခ၀ါချတာတွေ.. လာဘ်ပေး/ယူတာတွေကို.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်က.. ကိုင်တွယ်မယ်လို့ကြေညာတက်လာတာဖြစ်ပြီး.. သမ္မတဦးထင်ကျော်လည်း ထပ်ပြောထားတာမို့.. ဒါက တိုင်းပြည်သစ်အတွက်လိုတာလို့ထင်ပါတယ်..။ ဒီကိစ္စမျိုးက.. အခုမှတက်တာ..နောက်မှတက်တာတော့မရှိ…။
သိသလောက်တော့ မြန်မာပြည်မယ်.. ပြည်ပမှာဘဏ်စာရင်းမဖွင့်ရ.. ဖွင့်ထားတာကို အခွန်ပြရမယ်လို့.. ဥပဒေ/လုပ်ထုံးမထုတ်ထားသေးပါ..။
ယူအက်စ်မှာတော့.. လွန်ခဲ့တဲ့ ၁နှစ်လောက်ကမှ.. အသည်းအသန်ထုတ်လိုက်တာ…။
သူတို့(ယူအက်စ်အစိုးရ) ကအဲဒီလောက်ကတည်းက .. ဒီစာရင်းသိပြီးသွားဟန်ရှိပါတယ်…။
kai says: ယူအက်စ်မှာ တက်စ်ရီတန်းလုပ်တော့ ..မှတ်မိသလောက် တမြန်နှစ်ကမှ Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR) ဆိုတာနဲ့.. ပြည်ပမှာဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ထားသူတွေ စာရင်းပြရမယ်လို့ ပါလာတယ်မှတ်မိတယ်..။
လုပ်ထုံးဥပဒေက အဲဒီအချိန်ကမှထွက်တာမို့.. ရှေ့ကလူတွေ အဲဒါနဲ့ ဥပဒေအရသက်ဝင်ပြီး.. အခွန်ငွေလိုက်ကောက်လို့ မရ/အရေးယူလို့မရဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်..။
အိုဘားမားမိန့်ခွန်းတွေထဲ တခုမှာ ပြည်ပမှာဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ထားသူတွေကြောင့် အခွန်ငွေတွေအရမ်းနစ်နာတယ်ပြောပြီးနောက်မှ.. ဒါကထွက်လာတယ်လို့လည်းမှတ်မိပါတယ်…။
မြန်မာပြည်လို ဘဏ်စနစ်က အူကြောင်ကြောင်.. အကြွေးရာဇ၀င်မရှိ.. ငွေစက္ကူတွေဖျက်သိမ်းတတ်တဲ့ နိုင်ငံမျိုးမှာ မိမိရှိငွေကို နိုင်ငံအပြင်မှာသွားစုထားတဲ့ သဘောရိုးသူဌေးတွေလည်း မနည်းရှိလောက်တယ်ထင်တာပါပဲ..။
ဒါပေမယ့် ဒါတွေက ငွေခ၀ါချသဘောမို့. တိုင်းပြည်အမြတ်ခွန်အလွန်နစ်နာတာအပြင်.. ငွေမဲနဲ့လဘ်ပေး/ယူမှာလည်း အသုံးချနေနိုင်တာမို့.. လုပ်ထုံးဥပဒေသစ်ထုတ်သင့်ပြီး.. မလိုက်နာသူတွေကို ဒဏ်ကြေးချသင့်တယ်ထင်ပါကြောင်း..။ Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR)
ဦးကြောင်ကြီး says: ဘဏ်စာရင်းလို့ ထပ်ဖြည့်သာလေ.. ခုဟာက ပင်လယ်ရပ်ခြားမှာ ဘယ်လိုရမှန်းမသိတဲ့ငွေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ကုမဏီဖွင့်… ရလာတဲ့ငွေကို အခွံလျှောင်တာ…။ အဲဒီဥပဒေသည် ဝင်ငွေခွန်နဲ့ အကြုံးဝံမည်။
kai says: အပေါ်မှာနာမယ်ထပ်နေတာတွေက.. နာမယ်တခုနဲ့.. အကောင့်၂ခုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်…။
စိန့်တိုင်းသားနာမယ်..။ အိန္ဒိယနာမယ်..။ ဘိုနာမယ်တွေဆိုရင်တော့ မသိ…။
ဗမာနာမယ်ကို.. အဲဒီနာမယ် ၄၉၁၈ ကနေ တခုဆီ တွေ့သလောက်ဆွဲထုတ်ထားတာတွေဖြစ်ပါကြောင်း..။ အမှားတွေပါနိုင်ကြောင်း..
Ko Ming-Yu	Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6338
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ကျော် မပါဘူးနော် …ကျော်ပါဘူး..မယုံရှာကျိ အဟိ
kai says: KYAW WIN
ကျော်ပါတယ်ဗျ…။ ၂ယောက်တောင်တွေ့တယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3552
ဦးဦးပါလေရာ says: အခုလို အမည်စာရင်းထွက်လာတာကောင်းပါတယ်…
နောင် ဆက်ခိုးမယ့်သူတွေအတွက်လဲ ဒုစရိုက်ဆိုတာ ဆိတ်ကွယ်ရာမရှိဘူးလို့ သတိပြုစရာတစ်ချက်ရသွားတာပေါ့..
နိုင်ငံခြား ငွေစာရင်းရှိတိုင်းတော့လဲ မရိုးမသားလို့ ပြောလို့မရသေးပါဘူး..
သို့သော်… လက်ရှိအခြေအနေအရတော့ ဘာမှမလုပ်သေးတာ ကောင်းပါတယ်..
မြစပဲရိုး says: ဒီမှာ လဲ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကမ်မရွန် ရဲ့ အဖေ နာမည်ပါတယ် ကိုပါ။
ဒေးဗစ်ကမ်မရွန် ကိုယ်တိုင် လဲ ရှယ်ယာပါဘူးတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ် မဖြစ်ခင် ရောင်းထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်။
သူကတော့ အဲဒီ အတွက် ဝင်ငွေခွန် အပြည့်ဆောင်ခဲ့ ပါတယ် ပြောတာပါဘဲ။
တကယ်တော့ ငွေ တွေ ကို ရင်းနှီးဖို့ လက်ခံတဲ့ နိုင်ငံ က ဝင်လာတဲ့ ငွေတွေ ကို စစ်ရမှာ ထင်ပါတယ်။
စီးပွါးရေးသမား တွေ ကတော့ နည်းမျိုးစုံ သုံးပြီး စီးပွါးရှာမှာပါဘဲ။
သူတို့လဲ အလုပ်ဖြစ် နိုင်ငံလဲ အကျိုးရှိ မဲ့ နည်းလမ်း စည်းကမ်းတွေ ကို ချပြနိုင်တဲ့ နေရာတွေ က တိုးတက်သွားတယ် ထင်တာပါဘဲ။
မြန်မာပြည် ကိုတော့ လက်ရှိ အခြေအနေမှာ အတော်လေးမျှော်လင့်ချက် ထားနိုင်ပါတယ်။
တကယ်ဘဲ လူညီရင်၊ စည်းကမ်းရှိရင်၊ အချင်းချင်း ခြေမထိုးဘဲ တွဲခေါ်နိုင်ရင်၊ အများ ကို စေတနာထားပြီး ဝင်းဝင်း ကို ကြည့်တတ်ရင် တိုးတက်ဖို့ အရမ်း မခက်နိုင်ပါ။
ကျွန်မတို့မှာ လူ အရင်းအမြစ် ရော သဘာဝ သံယံဇာတပါ မရှားပါလေ။
ရှိတာတွေ ကို နိုင်ငံအတွက်မသုံးနိုင်ကြလို့ သာပါ။
ဦးကြောင်ကြီး says: ဒေါ်စုဘာလှုပ်မလဲ ပျော်ပျော်ကြီး စောင့်ကြည့်မယ်… တဖြူးဖြူးတိုက်တဲ့လေလား.. လိုရာ လှောခတ်ပေးမည့်လှေလား… လေနဲ့လှေ ကွဲအောင်…
kai says: ALTSEAN-BURMA က မြန်မာတွေနာမယ်ပါတဲ့.. PP သတင်းရယ်..။
ဧရာဝတီက အင်္ဂလိပ်သတင်းရယ်.. တက်လာပြီးမှ ပြန်ဆွဲချခံရတယ်…။
သဘောက… နာမယ်ပါနေသူများသည်.. အချဉ်မဟုတ်..။
ခင်ဇော် says: နာ့ နံမည် မပါတာတော်သေးးး
စလုံး ဘဏ်တွေ လှုပ်မယ်ဆိုလို့ ရှိတဲ့ လက်ကျန် ၃၀ တောင် မနေ့ က ထုတ်ထားးရဒယ်..
Wow says: ငင့် မြန်မာဘဏ်တွေကော ဟိုတစ်ခါ ဘဏ်တွေ ပိတ်တုံးကလိုဖြစ်မာလား
Thint Aye Yeik says: .တော်သေးတယ်…
ကျနော့် နာမည် ပါမလာလို့…။ .နောက်ပိုင်း ယူအက်စ်အစိုးရနဲ့ ချိတ်ဆက် လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေမှာ…
ကျနော်ကတော့ အဆင်ပြေမှာ သေချာနေပြီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.